Myanmar vs Timor Post-Match Press Conference – Myanmar Football Fedration
ကျွန်တော်တို့ အခုမှ ပွဲစဉ်(၁)ပွဲပဲ ကစားရသေးတာပါ။ အသင်းတွေ အားလုံး ၂ ပွဲစီ ကစားရပါဦးမယ်။ အုပ်စုတက်ပြီလို့ မပြောချင် သေးပါဘူး။ ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာ ဘယ်အသင်းနဲ့တွေ့မလဲ ဆိုတာကိုလည်း ကြိုမစဉ်းစားသေးပါဘူး။ အခြားအုပ်စုမှာလည်း ၂ ပွဲစီ ကစားဖို့ ကျန်နေပါသေးတယ်။ မြန်မာအသင်း အနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ ပြန်သုံးသပ်နေပါတယ်။ နောက်ပွဲတွေ အတွက်ပြောချင်တာက ပရိသတ်တွေ အခုလိုပဲ လာရောက် အားပေးဖို့ပါ။ လာမယ့်ပွဲတွေ ရလဒ်ကောင်းဖို့ မြန်မာအသင်းနဲ့ ပရိသတ် အတူတူ ကြိုးစားသွားချင်ပါတယ်။
မြန်မာအသင်း နည်းပြ ရော်ဂျာ
We had just already played only one match. All teams will have to play2matches each. I don’t want to say that we will reach semi-final. I’m not think which team we will meet in semi-final because there’re also2matches for other group. I’m just considering for my team. I want to invite the fans to the stadium to come and support Myanmar team. I will try to get great result together with the Myanmar people.
Myanmar Coach Reuners Roger
ကျွန်တော်တို့ အသင်း ဒီနေ့မှ ရောက်တယ် ။ ဒီနေ့ပဲ ပွဲကစားရတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ တစ်သင်းလုံး အရမ်းပင်ပန်းခဲ့ရပါတယ်။ တီမော အသင်းက ယူ၁၉ ကစားသမားတွေ အခြေခံပြီး လာမယ့် အနာဂတ်အတွက် ပြင်ဆင်နေတဲ့ အသင်းပါ။ ပထမဆုံး နိုင်ငံတကာပွဲ အတွေ့အကြုံက ကျွန်တော်တို့အတွက် အများကြီး အကျိုးရှိပါတယ်။
တီမောနည်းပြ – ဒါဆေးဗား ကာဗယ်ဟို
We arrived at Myanmar today and played today. So the whole team was tired. Timor team is preparing for the future based on U-19 players. We got too much experiences from this first international tournament.
Timor Leste Coach – Gelasio Da Silva Carvalho
English latest news National Team slider Women
AFF AFF MYANMAR Women's Championship 2016 National Women's Team
AFF MYANMAR Women’s Championship 2016 ပွဲကြိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ